Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na isi ịsa ahụ nwere ntakịrị mmiri - Akụkọ - Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na isi ịsa ahụ nwere ntakịrị mmiri
Nkeisi mmiri mmiribụ ngwa ịsa ahụ dị mkpa maka ezinụlọ ọ bụla. Ọ bụrụ na mmiri dị n'isi ịsa ahụ dị ntakịrị, ahụ agaghị adị anyị mma mgbe anyị na-asa ahụ. Enweghị ike ịsa ahụ. Yabụ kedu ihe kpatara obere mmiri ịsa ahụ?
1. Ihe mbụ na-emekarị bụ na a na-egbochi isi mmiri ịsa ahụ. A ga-enwe nzacha na isi mmiri ịsa ahụ ruo oge ụfọdụ, nke ga-akwakọba ụfọdụ ájá ma ọ bụ ọbụna obere nkume. Ka oge na-aga, ọ ga-emechi isi ịsa ahụ ma mee ka obere mmiri pụta. A na-edozi ọnọdụ a nke ọma, ọ bụrụhaala na anyị na-akwasa ya. Hichaa nzacha n'ime isi mmiri ịsa ahụ wee kpochaa ya na mmiri.
2. Ọnọdụ nke abụọ bụ obere nrụgide mmiri. Ihe kpatara nrụgide mmiri dị ala bụ mgbe ụfọdụ nkwụsị nke ọkpọkọ mmiri mmiri. N'oge a, anyị nwere ike amaghị ebe ntapu ahụ mere. Ị nwere ike ịkpọ ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ mmiri ma gwa ha ka ha bịa lelee ma nrụgide mmiri ọ dị mma.
3. Ọnọdụ nke atọ bụ naisi mmiri mmirina-egbochi. N'ihi na mmiri n'ebe ụfọdụ dị ntakịrị alkaline, ọ dị mfe ịmepụta ọnụ ọgụgụ ruo ogologo oge ma gbochie isi mmiri ịsa ahụ. Anyị nwere ike iji nha nha ma ọ bụ agịga mee ka ọ daa. Isi mmiri ịsa ahụ ga-alaghachi na ọnọdụ mmiri dị nro.
4. Ọ bụrụ na isi mmiri ịsa ahụ nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu, mgbe ahụ anyị nwekwara ike iji mmanya ọcha wụsa ya n'ime akpa rọba, wee kechie isi ịsa ahụ, nke mere na mgbe otu abalị gasịrị, mmanya na-acha ọcha ga-emeghachi omume na alkali dị na ya. ịsa ahụ. Wepu limescale naisi mmiri mmiri. N'ụzọ dị otú a, ịsa ahụ ga-aghọ ihe mgbochi ọzọ.
5. Ihe kpatara nke ise bụ na ala ndị dị elu dị elu, ma ọ bụ n'oge oke mmiri na-eri. Mmiri mmiri dị ntakịrị, anyị nwere ike dochie ihe nrụgideisi mmiri mmirin'oge a. Ụdị isi ịsa ahụ adịghị ọnụ, ọ nwere ike ịpịnye ya ozugbo ma dochie ya.
6. Usoro nke isii anyị nwere ike itinye aka na mpaghara ụfọdụ ma ọ bụ ala ndị nwere obere nrụgide mmiri. Wụnye mgbapụta nkwalite. Site na nrụgide na ọkpọkọ, mmiri si na isi mmiri ịsa ahụ ga-ebuwanye ibu
Nke gara aga:Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na isi ịsa ahụ na-agbapụta
Osote:Kedu ka esi ahọrọ kọlụm ịsa ahụ?